Kwenyuke izimendlela kobehlahla umoba - Ilanga News
Home Izindaba Kwenyuke izimendlela kobehlahla umoba
Kwenyuke izimendlela kobehlahla umoba
Uthi usenikwe nemoto njengoba esengu-Supervisor
UNKK Funeka Malevu (owesokudla) enendodakazi yakhe endala, uNkz Khanyisile Malevu. ISITHOMBE NGU: Colleen Dardagan
KAYIBANGA lula indlela ebheke empumelelweni kowesifazane waseTable Mountain, eMgu-ngundlovu, oqale ehlahla umoba epulazini abelisebenzela wagcina “eseyinduna” (supervisor).
UNkk Funeka Malevu (54), uthi kwalimala umyeni wakhe, uMnu Zachariah Malevu, engozini yeloli, wahlala esihlalweni esinamasondo kodwa lokho akakuvumelanga ukuba kuqede ngempilo yomndeni wakhe.
Uthi wacela kumyeni wakhe owayengasasebenzi ukuba amvumele ayosebenza epulazini elingumakhelwane, ahlahle umoba. Nebala umsebenzi wawuthola eDonovale Farm, eyayiphethwe nguMnu Chris
Uthi wayevuka ngo-04h00 ekuseni alungisele umyeni, ashiye izingane enkulisa ngaphambi kokuya emsebenzini. Wayebuya seliyozilahla kunina, aphinde anakekele umyeni wakhe nezi-ngane zabo ezimbili ngaphambi kokuba anakekele imfuyo nesivande sakhe semifino.
“Ngesikhathi ngisebenza emasimini, kayikho into eyayi-ngikhulula njengokubona indawo esengiyishayile ikhanya kuhle kwebala.
“Ngangijabula njengengane encane uma ngibona isivuno somoba siza kahle, ngibona ukuthi umsebenzi wokuhlahla ungilindile,” kusho yena.
Uthi ukholwa wukuthi ukusebenza kanzima wakufunda kunina njengoba wakhula uyise esebenza ezimayini, eGoli, unina enakekela umndeni nemfuyo ekhaya.
“Lo msebenzi wokuhlahla umoba kwakwaziwa ukuthi ngowamadoda, abaqashi bema-nqika ukuthatha abantu besifa-zane kuwo, bethi ngeke bakwazi ukuwenza ngoba babuthaka.
‘Nami kwathi uma ngifika ngiyosebenza (eDonovale Farm), bangibuzisisa ukuthi ngizokwazi yini ukuhlahla umoba, ngathi ngizokwazi. Ngesikhathi ngiqa-shwa, kwakuyimina ngedwa owesifazane kwabesilisa abawu-35.
“Umoba esasiwuhlahla wawumude, kunzima ukusebenza kuwona. Ngosuku lwesibili ngisebenza, kwafika omunye wakwa-Edmonds, inhliziyo yami yashona phansi ngoba ngangizi-tshela ukuthi uzothi mangigoduke ngoba umsebenzi unzima.
“Akubanga njalo njengoba wangigqugquzela, wathi ngiza kahle, mangiqhubeke. Ngenyanga yokuqala ngahola isheke lika-R1 000. Nganginga-kaze ngiyiphathe imali engaka ngesandla sami.
“Ngaphuma ngishesha epulazini, ngicabanga ukuthi benze iphutha ngokungiholela isamba semali engaka,” kusho yena. Uthi ngesizini elandelayo
yokuvuna, wathola umklomelo wokuba ngumhlahli womoba ohamba phambili.
Lokhu kwenzeka kwaze kwaba yiminyaka emithathu ilandelana. abakwa-Edmonds bachaza uNkk Malevu njengowesifazane owayesebenza ngokuzimisela, evame ukuthenga amawolintshi ayesale kade kukhethwa ayezo-thunyelwa kwamanye amazwe, awadayise ebhasini ngesikhathi ephuma emsebenzini.
Bathi wafuna umsebenzi epulazini elingumakhelwane, wagcina efakwe esikhundleni sokuba ngu-supervisor.
“Ngizame izincwadi zokusha-yela nazo engagcina ngizitholile emuva kweminyaka emine ngizama ngihluleka. Manje ngisebe-nza njenge-supervisor endaweni okutshalwe kuyona i-tea tree nomoba. Senginikezwe nemoto yenkampani ukuze kube lula ukusebenza,” kusho uNkk Malevu.
Previous articleUthi akasalali owebelwe usana olunosuku luzelwe
Next articleKusolwa ukutapa kwenyuka ukhuvethe